Isithando somlilo esincibilikisiwe, esenzelwe njengesithando sokungeniswa kwesiteshi, ine a inani eliphelele lokubamba lama-50 t futhi ilusizo
ngoba-isisindo sama-40 t esiphezulu. Amandla okuncibilika akhiqizwa ama-inductors amane afakiwe at ama-engeli achaziwe avuliwe
esithandweni somlilo nge a inani eliphelele lokuxhuma elingu-3,400 kW. I-inductor ngayinye ifaka i-transformer yayo evunyelwe yokusebenza kokulawulwa ngakunye.
In the umcimbi yokwehluleka kwe-inductor eyodwa, abanye babamba isithende esishisayo at izinga lokushisa ngenkathi i-inductor engalungile iyi
kufakwa omunye. Isithando somlilo futhi silungele ukusebenza komkhiqizo ngemuva a isikhathi se- 12 amahora. Insimbi encibilikisiwe
wathela out ngokusebenzisa isithando somlilo futhi ungadluliselwa at i-zero gradient kuya isithando somlilo at the isilinganiso ka 4 t/h. Ukubanjwa-futhi-thusi isithando somlilo futhi samukela ukuncibilika ngesithando somlilo. Lokhu kwenza insimbi kuya ibuyiselwe kuya isithando somlilo uma kudingeka, ngokufanayo at i-zero gradient.
Inductor Service Life futhi Ukufaka esikhundleni Isikhathi
The impilo yenkonzo ye i-inductor kuya ngomthamo ofakiwe, the Uhlobo lwe uhlelo lokupholisa, ukuma kwesiteshi, kanye nohlobo lwendwangu yobumba. Insiza izimpilo zezinsuku ezingama-250 zibikwa ngomoya-selehlile inductors ilinganisiwe at 250 kW, kodwa kuphela 100 izinsuku zezilinganiso ezingama-400 kW. In kokubili Amacala, ukukhishwa kwensimbi cishe kwakungu-1,600 t aluminium.4
Ngokuthuthukisa ukupholisa umphumela nohlobo lwendwangu yobumba, kungenzeka kube ngama-400-kW inductors ukuze ukuthola izici zempilo ze
Izinsuku ezingama-250 futhi okuningi nge okufakwayo kwensimbi okungu-2,500 t/inductor. Nokho, izimpilo zenkonzo kuphela 100 izinsuku nazo hhayi okungaziwa. Esinye isitshalo esisebenzayo imibiko impilo yenkonzo izici ka 15-27 izinyanga.
Phezulu inductor izilinganiso ezingama-900 kW futhi okuningi nge-proamazinga okudonsa ka 30 t/ ngosuku inductor, kudinga ukuqondiswa
ukugeleza kwe- onesigqi esinamandla nokupholisa okunamandla, babe hhayi ibisasebenza noma ibuphi ubude besikhathi. Okuhlangenwe nakho kokuqala kubonisiwe ukuthi ukugeleza okunamandla izimbangela ukuguguleka kwenhlabathi mpo iziteshi.
Ngisho noma kunjalo hhayi kuyadingeka kuya hlanza iziteshi, i- oyifunayo service impilo ka inductor kwaba kuncishisiwe. Uboyaukuthuthuka kwezobuchwepheshe kwenziwe ngokunciphisa ijubane okuqondisiwe flow futhi ngokunikeza a uzinze kakhudlwana amanzi ukupholisa
system, okuyi kunikeza ithemba ngoba ukuthola impilo yenkonzo izici ka 12 izinyanga kwabaphezulu-abasebenza ngamandla.
I-Aluminium scrap ingacutshungulwa ngamayunithi wokuncibilika ahlukahlukene:
• ngqo-iziko elishisayo (igesi noma uwoyela-ukuxoshwa) ngezindawo zokuthola ukushisa
• induction encibilikisa iziko, isiteshi noma uhlobo lwe-crucible.
Ukukhethwa kweyunithi kunqunywa ikakhulukazi ngokutholakala nohlobo lwamandla nokukhiqiza izindleko.
Ukunikezwa kwamanje kukaphethiloli kuyasidinga kuya re-hlola ukutholakala kwayo esikhathini esizayo. It is kuya kulindeleke ukuthi ukunyuka kwamanani kaphethiloli nakho kuzobandakanya an ukwanda kwentengo yamandla afakwa esikhundleni- Ugesi- kuleso simo wacabanga kumele be inikezwe
ngaphezu kwakho konke okunye kuya ukusetshenziswa okuhle kwaleyo ndlela yamandla afakwa esikhundleni. Lapha, Isithando somlilo sokungeniswa sinikeza a
high-isici sokusetshenziswa kokufakwa kwamandla, ngoba ukushisa kwenziwa ngokufakwa kukagesi ngqo kubhavu.
Umsebenzi okhulayo izindleko emazweni athuthukile futhi amanani entengo aphezulu ayasiphoqa kuya remelt ngisho ongaphakeme-grade, ukukhanya-gauge isigaxa futhi kuya sebenzisa a iyunithi encibilikayo lapho kunezinto ezibalulekile ukuthi nquma ukucubungula izindleko aphansi, okungukuthi amandla izindleko, ukuncibilikisa ukulahlekelwa, ukugcinwa izindleko, nokusebenza izindleko.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi aluminium induction oven, i-aluminium iyancibilika, i-aluminium ishisa isithando somlilo, i-aluminium intengo ehovini ecibilikayo, aluminium smelting, i-aluminium ehogela isithando somlilo, thenga i-aluminium smelter, induction aluminium isithando somlilo, ukuchithwa kwe-aluminium, i-induction melting oven, lokungeniswa smelting aluminium esithandweni, ukuncibilika kwezicucu ze-aluminium Imeyili kwemikhumbi